रोनाल्डो र मेस्सी : तथ्यांकमा को अगाडि ? | Hamro Khelkud
रोनाल्डो र मेस्सी : तथ्यांकमा को अगाडि ?
एजेन्सी – विश्व फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिओनेल मेस्सीको नाम सायदै कुनै कीर्तिमानसँग जोडिन बाँकी होला । पछिल्लो दशकमा गरेको प्रदर्शनले यी दुईलाई विश्व फुटबलकै सर्वकालीन महान खेलाडीको सुचिमा उभ्याएको छ ।
विश्व फुटबलमा यी दुईले जित्न बाँकी व्यक्तिगत अवार्ड सायदै होला । क्लब फुटबलमा पनि दुवैले सफलताको शिखर चुमेका छन् । तर जब अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको कुरा आउँछ, दुवैले विश्वकपमा सफलता हासिल गरेका छैनन् । रोनाल्डोले पोर्चुगललाई युरोपेली च्याम्पियनसिप जिताउँदा मेस्सी भने अझैपनि अर्जेन्टिनाका लागि उपाधि दिलाउन संघर्षरत छन् ।
खेलाडीको मैदानभित्रको प्रदर्शन, टोलीमा सहकर्मीको स्तर र प्रशिक्षकको रणनीतिले उनीहरुको नतिजामा असर पर्छ । दुई खेलाडीमा को उत्कृष्ट भन्ने आ-आफ्नो तर्क हुन सक्छ । तर तथ्यांक भने सर्वविदित रहन्छ । प्रस्तुत छ मेस्सी र रोनाल्डोको हालसम्मको तथ्यांक :
१. क्लबको लागि गोल
क्लबको लागि गोल संख्या हेर्ने हो भने मेस्सीले भन्दा रोनाल्डोले धेरै गोल गरेका छन् । तर पोर्चुगिज स्टारले मेस्सीभन्दा २ सिजन बढी खेलेका छन् । रोनाल्डोले ६ सय ७४ गोल गर्दा मेस्सी २ गोलले मात्र पछाडी छन् ।
दुवै खेलाडीले क्लबका लागि ६ सय ७० गोल माथि गर्दा प्रदर्शनमा एकरुपता देखाएका छन् । विशेषगरी २००९-१० देखि २०१४-१५ सिजनसम्म दुवै आफ्नो करिअरकै उच्च विन्दुमा थिए । एकै सिजनमा सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान पनि मेस्सीको नाममा छ । उनले २०११-१२ सिजनमा ७३ गोल गरेका थिए ।
औसतमा हेर्दा पनि मेस्सी नै अघि छन् । रोनाल्डोले प्रति सिजन ३५ गोलको औसतमा प्रदर्शन गर्दा मेस्सीले ३९.५ गोलको औसतमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । रोनाल्डोले एकै सिजनमा सर्वाधिक ६१ गोल सन् २०१४-१५ सिजनमा गरेका थिए । उनले २०१०-११ देखि २०१५-१६ सिजनसम्म लगातार ६ सिजन ५० गोलको आँकडा पार गरेका थिए ।
पछिल्ला केहि सिजनमा रोनाल्डोको प्रदर्शनमा केहि गिरावट आएको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी युभेन्टस गएको पहिलो सिजन रोनाल्डोले ३० गोलको आँकडा पनि पार गर्न सकेनन् । मेस्सीले भने केहि चोटका बाबजुद पनि लगातार एकैरूपको प्रदर्शन दिँदै आएका छन् ।
२. क्लब असिस्ट
मेस्सी र रोनाल्डोको असिस्ट दाँज्ने हो भने मेस्सी निकै अगाडि छन् । मेस्सीको खेल्ने शैलीले पनि उनलाई खेलमा बढी आबद्ध गराउँछ । मेस्सीको गोल अवसर सिर्जना गर्ने क्षमताले गर्दापनि उनलाई रोनाल्डोभन्दा केहि राम्रो भन्ने आधार दिएको छ । रोनाल्डोको पनि फरवार्डको रुपमा असिस्ट संख्या उत्कृष्ट छ, तर मेस्सीको तुलनामा उक्त संख्या फिक्का पर्छ ।
३. च्याम्पियन्स लिग
रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनले रियल म्याड्रिड र म्यानचेस्टर युनाइटेडमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै थुप्रै कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाए । युभेन्टस गएपछि भने च्याम्पियन्स लिगमा उनको प्रदर्शन फितलो हुँदै आएको छ ।
गोल संख्यामा पछि रहेपनि मेस्सीको प्रदर्शन पनि कमजोर छैन । प्रति खेल गोल औसतमा मेस्सी निकै अघि छन् । यसै गतिमा जाने हो भने मेस्सीले रोनाल्डोलाई भेट्ने सम्भावना छ तर उमेरले कस्तो साथ दिन्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
४. फिफा विश्वकप
विश्वकपको प्रदर्शन हेर्दा भने मेस्सी र रोनाल्डो दुवैले आफ्नो स्तरअनुसार नतिजा दिन सकेका छैनन् । दुई खेलाडीको तुलना गर्दा भने रोनाल्डोले मेस्सीभन्दा कम खेलमा धेरै गोल गरेका छन् । तर प्रतियोगितामा भने मेस्सी फाइनल पुग्दा रोनाल्डोले सेमिफाइनल यात्रा पार गर्न सकेका छैनन् ।
मेस्सीले सन् २०१४ मा प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै गोल्डेन बल जितेका थिए । तर फाइनलमा जर्मनीसँग पराजित भएपछि उनी उपाधिबाट विमुख भए ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय खेल
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा रोनाल्डो मेस्सीभन्दा निकै अघि छन् । दुई वर्षअघि करिअर सुरु भएका कारण पनि उनलाई केहि फाइदा पुगेको छ । रोनाल्डो हाल १ सय ७३ खेलमा १ सय ३ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो स्थानमा छन् । उनी अलि दाइको १ सय ९ गोलको कीर्तिमान पछ्याइरहेका छन् ।
मेस्सी अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता त हुन् । तर रोनाल्डोको तुलनामा उनी पछाडी नै छन् । मेस्सीले १ सय ४२ खेलमा ७१ गोल गरेका छन् । उनको गोल औसत ०.५ छ भने रोनाल्डो ०.६ गोल औसतसहित केहि अगाडि छन् ।
६. टोलीका लागि उपाधि
मेस्सी र रोनाल्डोको उपाधि संख्यामा खासै अन्तर छैन । तर लिग उपाधिमा भने मेस्सी अघि छन् । उनले बार्सिलोनाबाट खेल्दै १० पटक ला लिगा उपाधि जितेका छन् । रोनाल्डोले भने इंग्ल्यान्ड, स्पेन र इटालीमा जोडेर कुल सात पटक उपाधि जितेका छन् । रोनाल्डोले तीन फरक देशमा लिग जित्दै आफूलाई फरक अवस्थामा पनि सिद्ध गरेका छन् ।
रोनाल्डोले मेस्सीलाई च्याम्पियन्स लिगमा भने पछि पारेका छन् । रोनाल्डोको यस प्रतियोगितामा एकल दबदबाले उनलाई मिस्टर च्याम्पियन्स लिगको उपनाम नै दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि रोनाल्डोले युरोपेली च्याम्पियनसिप र यूईएफए नेसन्स लिग जित्दा मेस्सी उपाधिविहिन छन् ।
७. व्यक्तिगत उपाधि
जब व्यक्तिगत उपाधिको कुरा आउँछ, पछिल्लो दशक यी दुईले नै सबै अवार्डमा वर्चस्व जमाएका छन् । मेस्सीले सन् २०१९ मा ब्यालोन डी’ओर जित्दै सर्वाधिक प्रतिष्ठित उपाधिमा रोनाल्डोलाई पछि पारे । मेस्सीको यो छैटौं उपाधि थियो भने रोनाल्डोले ५ पटक आफ्नो नाम यो उपाधि गरेका छन् ।
यता रोनाल्डोले फिफाले वर्षका उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रदान गर्ने अवार्ड २ पटक जित्दा मेस्सीले १ पटक जितेका छन् । मेस्सीले लिगको सर्वोत्कृष्ट अवार्ड धेरै पटक जितेका छन् तर रोनाल्डोले तीन फरक लिगमा यो उपलब्धि हासिल गर्दै फरक सफलता हासिल गरेका छन् ।
२०२१ जुन सम्मको तथ्यांक